Warkii Aduunku Sugayay Oo Kooxaha Premier League Heshiis Ka Gaadheen Iyo Natiijada Codbixintii Kooxaha Laga Qaaday Oo Farxad Wayn Leh. – Gool24.Net
Warkii Aduunku Sugayay Oo Kooxaha Premier League Heshiis Ka Gaadheen Iyo Natiijada Codbixintii Kooxaha Laga Qaaday Oo Farxad Wayn Leh.
Kooxaha Horyaalka Premier league ayaa shirkii maanta loo balansanaa cod ku meel mariyay in barri oo talaado ah ay kooxuhu tababarka ku soo laabtaan waxayna go’aan ku gaadheen in la bilaabo soo laabashada xili ciyaareedka premeir leauge.
Kooxaha Premier League ayaa maanta oo isniin ahayd waxay u balansanaayeen in cod laga qaado waxaana codkii ka soo baxay war ay jamaahiirta kubbada cagtu aad ugu farxayso oo ah in mashruuca dib u bilaabashada xili ciyaareedka premier league uu barri ka bilaami doono.
Shirkii maanta ee 20 ka kooxood ee Premier League waxaa loo dooday qodobo xaasaasi ah wuxuuna ahaa kulankii ugu adkaa mudooyinkii la soo dhaafay maadaama oo looga arinsanayay soo laabashada ciyaartoyda kooxaha ee tababarka, xuquuqda baahinta tooska ah iyo waliba tilmaamaha caafimaad ee la raaci doono.
Waxyaabaha ugu adkaa ee laga dooday waxaa ka mid ahaa in TV-yada baahinta premier League iska leh dib loogu celiyo lacag dhan 330 milyan gini oo ay kooxaha horyaalku hore u qaateen waxaana sidoo kale laga hadlay baahinta tooska ah ee 92 ka kulan ee Premier league baaqiga ka ah.
Waxaa la sugayaa in maamulka Premier league uu war rasmi ah ka soo saari doono sharka muhiimka ah ee u socda kooxaha Premeir league waxaana sidoo kale la sugayaa haddii ay kooxaha Premier league dhinacooda war saxaafadeedyo ka soo saari doonaan iyo haddii mid lagu midaysan yahay la soo wada saari doono.
Kadib laba bilood oo ay kooxaha premier league isku mari waayeen soo laabashada xili ciyaareedka waxay hadda u muuqataa in ay qaadeen talaabadii ugu waynayd oo ah in barri lagu soo laaban doono tababarka kooxaha si loo diyaar garoobo.
Waxaa sidoo kale kooxaha iyo maamulka Premier league laga sugayaa in ay shaaciyaan waqtiga rasmiga ah ee kulamada baaqiga ah dib loo bilaabi doono kaas oo ah warka ugu wayn ee ay hadda jamaahiirta kubbada cagtu sugayaan.
Dawlada UK ayaa ogolaatay in June 1 wixii ka danbeeya ay kulamada Premier league bilaami karaan laakiin waxaa jira kooxaha qaar dalbanaya in la siiyo waqti ku filan oo ay dib ugu diyaarin karaan ciyaartoyda kooxahooda ee aan labada bilood kulamada ciyaarin.
Haddaba waxay u muuqataa in kooxaha Ingiriiska iyo maamulkooda Premier league ay dhibaatooyin badan ka soo gudbeen isla markaana ay hadda ku soo dhawaanayaan dhamaadka habinti la’aantii waxaana la si joogto ah loo baadhi doonaa xaalada caafimaad ee ciyaartoyda.
Ciyaartoyda kooxaha Premier league ayaa la siin doonaa hanaanka caafimaad ee ay raaci doonaan iyada oo Ciyaartoyda laga helo farayska karoonaha la galin doono karantiil muddo 7 maalmood ah mana ahan inay tababar sameeyaan waxaana la bixin doonaa tilmaamo caafimaad oo dhamaystiran.
Wixii war ah ee shirka kooxaha iyo maamulka Premier league ka soo kordha isla marka ay xog cusub ka soo baxdo ayaanu insha Allah idiin soo gudbin doonaa.